» मुना हत्या प्रकरणः कामदार विजयको मोबाइलमा यस्तो भेटियो
मुना हत्या प्रकरणः कामदार विजयको मोबाइलमा यस्तो भेटियो
२०७६ फाल्गुन १०,शनिबार १२:४६
काठमाडौं, १० फागुन । ललितपुर सानेपाकी मुना कार्की र कामदार विजय चौधरी मृत्यु प्रकरणको रहस्य पत्ता लगाउन गरिएको मोबाइलको फरेन्सिक परीक्षणमा कुनै ‘क्लु’ नभेटिएको प्रहरीले जनाएको छ।
उहाँले मोबाइलबाट डिलिट गरिएका सामग्री ‘रिकभर’ गरेर हेर्दा त्यसमा समेत कुनै शंकास्पद विषय फेला नपरेको बताउनु भयो। मोबाइलमा रहेका अन्य सामग्रीको अध्ययन भइरहेको नेपाल खबरमा समाचार छ ।
यस्तो रहेछ मुना कार्कीको हत्यामा लुकेका भित्रि रहस्य
मोबाइलले खोल्ला त मुना कार्कीको हत्या रहस्य ?
मुनाको मृत्युः सिसिटिभीमा कैद भएको त्यो प्रतिविम्बित दृष्य…
मुना हत्या प्रकरणः चौधरीको ‘अण्डरवेयर’ मा विर्य र रगत, १३ मिनेटसम्म के गरे ?
मुना कार्की हत्याः प्रहरी छानबिनको सुई तेस्रो पक्षतिर